No.1825 Saturday, June 9, 2018 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No.1825 Saturday, June 9, 2018
No.1825 Saturday, June 9, 2018
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၁၁ ရက် (စနေ၊ ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၈)
ခွဲစိတ်ပါရဂူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဓားထိုးခံရမှု ကျူးလွန်သူ လူငယ်ခုနစ်ဦးကို ဖမ်းမိ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ တပ်မတော်ဆေး ရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ သည့် ခွဲစိတ်ပါရဂူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး တစ်ဦး ဓားထိုးခံရမှုနှင့် ပတ်သက် ၍ ကျူးလွန်သူ လူငယ်ခုနစ်ဦးကို ဖမ်းမိထားကြောင်း တိုင်းရဲတပ် ဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြော သည်။
ကလေးသူငယ်ဘဝကို ကာကွယ်နိုင်မှုစစ်တမ်းတွင် မြန်မာ အဆင့် (၁၀၇)၌ ရပ်တည်
ကလေးသူငယ်ဘဝကို ကာကွယ်နိုင်မှုအဆင့်တွင် နိုင်ငံ ပေါင်း ၁၇၅ နိုင်ငံ၌ မြန်မာနိုင်ငံက အဆင့် (၁၀၇)ဖြင့် ရပ်တည်နေ ကြောင်း ဇွန်လ ၁ ရက်တွင် Save the Children က ထုတ်ပြန်ခဲ့ သော End of Childhood Report 2018 စစ်တမ်း၌ ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်NHK သတင်းဌာန တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂျပန်သတင်းဌာန NHK က နေပြည်တော်ကိုသွားရောက်ပြီး တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံမေးမြန်း မှုအပြည့်အစုံကို7DAYNEWSစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးဖတ်ရူနိုင်အောင်ဘာသာပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။
အချစ်ရေးကောလာဟလတွေကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ မိုးစက်ဝိုင်
အချစ်ရေးနှင့်ပတ်သက် ၍ အဆိုတော်တစ်ဦးနှင့် ကော လာဟလများစွာ ထွက်ပေါ်ခဲ့ သော်လည်း ယင်းသတင်းများ မဟုတ်မှန်ဘဲ အချိန်တန်ပါက အသိပေးပြောကြားမည်ဟု မော် ဒယ်သရုပ်ဆောင် မိုးစက်ဝိုင်က ပြောကြားသည်။
ခင်ဦးမြို့နယ်ရှိမူလတန်းကျောင်းတွင် နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများ အက်ကွဲ၍ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်သူများကို အမည်ပျက် စာရင်းသွင်းသင့်ဟုဆို
ခင်ဦးမြို့နယ် သက်ပေး ကျေးရွာအုပ်စု တာတိုင်ကျေးရွာ ရှိ မူလတန်းကျောင်းတွင် အက် ကွဲကြောင်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ ကိုအမည်ပျက်စာရင်းသွင်း ကြေညာသင့်ကြောင်း စစ်ကိုင်း တိုင်းလွှတ်တော်ပို့ဆောင်ဆက် သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝဏ္ဏ ကပြောသည်။
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ကာကွယ်ဆေးကို ၂၀၁၉ တွင် လူသားဖြင့် စတင်စမ်းသပ်မည်
HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးနိုင်ငံတကာ၏ ကြိုးပမ်းမှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် စမ်းသပ်ဆဲ HIV ကာကွယ်ဆေးကို လူသားများဖြင့် စမ်းသပ်မှု ၂၀၁၉ ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင် စတင်ရန်စီစဉ် ထားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဆိုင်ကယ်စီးနင်းမှုများကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ရန် စီမံချက်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီး နင်းမှုများကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ် ရန် စီမံချက်ရေးဆွဲဆောင်ရွက် မည်ဟု လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်က ပြောသည်။
မဆန်းလှဟုဆိုနိုင်ငြား ‘ဖယ်’ထား၍မရသော . . .
(၁) မိုးဦးဝင်ခါစ တစ်ညနေခင်း . . .။ သဲသဲမဲမဲ ရွာချလိုက်သော မိုးကြောင့် နီးရာ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ထဲ ဝင်ခိုနေခဲ့ရ၏။ လေပါပါ သောမိုးသည် ဆိုင်အတွင်းပိုင်း ကျကျ စားပွဲအထိ မှုန်မှုန်မွှားမွှား လာတို့ထိသွားသည်။ လက်ဖက် ရည်များနေပြီမို့ မသောက်ချင်ဘဲ မှာထားသော Sting အနီပုလင်း မှာ ရေခဲမှုန်တို့ ကပ်တွဲခိုလျက်။ ဟော. . . မီးပြတ်သွားသည်ပဲ။ ငေးလက်စ စကိုင်းနက်ရုပ်ရှင် ဆီကနေ ဆိုင်ပြင်ကို ကြည့်မိ သည်။ လမ်းမကြီးဘေး မီးပွိုင့် လမ်းဆုံနား ဖြစ်သော်လည်း တဝေါဝေါမောင်းနေသည့် ကား များမှလွဲ၍ လမ်းပေါ်မှာ၊ ပလက် ဖောင်းပေါ်မှာ လူတစ်ဦး၊ နှစ်ဦးပဲ ထီးဆောင်းလျှောက်သွားနေ သည်။ လမ်းဆုံလမ်းခွ လမ်းမကြီး မို့ ပလက်ဖောင်းခင်းဈေးသည် တွေ များလှသော်ငြား သည်နေ့ တော့ ဈေးဗန်းတစ်ဗန်းပင်မရှိ။ မမြင်ရ။ လမ်းမကြီးဟိုဘက်က ဟွန်ဒေးကားရှိုးရွမ်းကြီးကတော့ ‘ဟည်း’ထနေပါ၏။ သူနှင့်ကန့် လန့်ဖြတ်လမ်းမကပ်ခြားနေသော ၂၄ နာရီ စီးတီးမတ်ကိုတော့ သည်စားပွဲကနေ မမြင်ရ။
ဂန္ဒီခန်းမကို မြို့ပြအမွေအနှစ်စာရင်းဝင် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်
နှစ် ၁၀၀ ကျော်သက် တမ်းရှိသည့် ဂန္ဒီခန်းမကို ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးက မြို့ပြအမွေအနှစ် စာရင်းဝင် ရှေး ဟောင်းလက်ရာ အဆောက်အအုံ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
မလေးရှားတွင် တရားမ၀င်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားအရေးကိုင်တွယ်နေ၍ သတိထားရန် မြန်မာသံရုံး သတိပေး
မလေးရှားအစိုးရသည်တရားမ၀င်အလုပ်သမားများ ငှားရမ်းခြင်းအစီအစဉ်ကို ဇွန်လကုန်တွင် ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်းနှင့်တရားမ၀င် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများ ဖမ်းဆီးရေးလုပ်ငန်း စီမံချက်ကို စတင်ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးက မြန်မာလုပ်သားများအား သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်သည်။
ကချင်စစ်ပွဲ ခုနစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဆုတောင်းပွဲ မြစ်ကြီးနား၌ ယနေ့ပြုလုပ်မည်
စစ်ဘေးရှောင်များပူးပေါင်းပါဝင်မည့် ကချင်ဒေသစစ်ပွဲခုနစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဆုတောင်းပွဲကို မြစ်ကြီးနားမြို့မနောကွင်း၌ ဇွန်လ ၉ ရက်(ယနေ့)တွင် ပြုလုပ်မည်ဟုဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပရေး တာဝန်ခံဆောင်ရွက်နေသူ မဆိုင်းနူးပန်ကပြောသည်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေး၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ သမ္မတအိမ်တော်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအပါအ၀င် အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး အခြေအနေများကို နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်၌ ယမန်နေ့ (ဇွန်လ ၈ ရက်) တွင် နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဝမ်းကွဲအစ်ကို ဒေါက်တာစိန်ဝင်းဦးဆောင်သော ညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို မတရားအသင်းမှ ပယ်ဖျက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဝမ်းကွဲအစ်ကို တော်စပ်သူဒေါက်တာစိန်ဝင်း ဦးဆောင်သောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB) ကို မတရားအသင်းအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပြီး ယင်းအဖွဲ့ဝင်များကို လည်း အကြမ်းဖက်သူများအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ခဲ့ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ယမန်နေ့ညတွင် ထုတ်ပြန်သည်။
ဆောမြို့တွင် ကျောင်းဆင်းချိန်အိမ်ပြန်သည့် ကလေးငယ်ခြောက်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး တောင်ကျရေနှင့် မျောပါ၊ သုံးဦးပျောက်ဆုံးနေ
မကွေးတိုင်း၊ ဆောမြို့တွင် ညနေကျောင်းဆင်းချိန်အိမ်ပြန်သည့် ကလေးငယ်ခြောက်ဦးနငှ့်အမျိုးသမီးတစဉ်ီး တောငက်ျရေနှင့် မျောပါပြီး သုံးဦးပျောက်ဆုံးနေ၍ ဒေသခံများနှင့်တာဝန်ရှိသူများက ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသည်။
မြန်မာ့ဂီတ သမိုင်းကို လေ့လာနိုင်မည့် မြန်မာတေးသီချင်း ပုဒ်ရေ ၁,ဝ၀၀ စုစည်းမှုမိတ်ဆက်
မြန်မာ့ဂီတသမိုင်းကို လေ့လာမည့်သူများအား ရည် ရွယ်၍ ဂီတရတနာ မြန်မာ့ဂီတ တေးသီချင်း အပုဒ် ၁,၀၀၀ စု စည်းမှု ပရောဂျက် ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း ဓီရာမိုရ်က ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ ဖြေရှင်းရာတွင် ပြည်ပကူညီမှုများရယူရန် ဆန္ဒရှိဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ ဖြေရှင်းရန် နိုင်ငံခြားဥပဒေအကြံပေးများ အပါအဝင် ပြည်ပ အကူအညီများ ကို ရယူရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း မြန်မာအစိုးရခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။
ထီးခီးနယ်စပ်ဂိတ်တွင် အစိုးရနှင့် KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ အဂတိလိုက်စားကြောင်း တိုင်ကြားမှုအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့၍စစ်ဆေး
ထီးခီးနယ်စပ်ဂိတ်ရှိ တာဝန်ကျ အစိုးရအရာရှိ အချို့ နှင့် KNU တပ်ဖွဲ့ဝင် အချို့ပူး ပေါင်း၍ အဂတိလိုက်စားမှုပြုလုပ် နေကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တိုင်ကြားမှုအပေါ်ယင်းဒေသရှိ ၎င်းတို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင် ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ပါက အရေးယူမည်ဟု KNU တပ်မဟာ (၄) မြိတ်-ထားဝယ်ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ စောဆာပိတုက ပြောသည်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ် အဆိုးမမြင်ရန် ဥရောပကုန်သည်ကြီးများအသင်းအမှုဆောင် ပြောကြား
မြန်မာပြည်သူ များအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှု လုပ်ငန်းများအပေါ် အဆိုးမ မြင်ရန် လိုအပ်ပြီး လုပ်ငန်းတိုင်း သည် တိုင်းပြည်၏သယံဇာတ လာယူခြင်းနှင့် ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်လာထုတ်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပကုန်သည်ကြီးများအသင်း အမ
ချင်းရွှေဟော်−လားရှိုး အမြန်လမ်း၊ ရထားလမ်းနှင့် ကွမ်းလုံတံတား အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဆွေးနွေး
ကွမ်းလုံတံတားဆောက် လုပ်ရေးနှင့် ချင်းရွှေဟော်-လားရှိုး အမြန်လမ်းနှင့် ရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရေး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်လင်းချင်း အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ ကွန်မြူနစ်ပါ တီ အတွင်းရေးမှူး မစ္စတာရန် ဟောင်ဒုံက မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည် စက်မှုအသင်းချုပ်နှင့်
ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရသည့် လွှတ်တော်အမတ် ရဲစခန်းသို့ သွားရောက်အဖမ်းခံရာ အာမခံဖြင့် ပြန်လွှတ်
ဆက်သွယ်ရေးဥပ ဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံ ထားရသည့် ရမ်းဗြဲမဲဆန္ဒနယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးသန်းမောင်ဦးသည် ဇွန်လ ၈ ရက်က စစ်တွေမြို့အမှတ်(၁) ရဲစခန်းသို့ သွားရောက်အဖမ်းခံခဲ့ ရာ ၎င်းကို အာမခံဖြင့် ပြန်လွှတ် ပေးခဲ့သည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအမှတ်စာရင်းများ စတင်ထုတ်ပေး
မွန်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၈ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အမှတ်စာ ရင်းများကို ဇွန်လ ၆ ရက်ကစတင် ထုတ်ပေးနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ သိန်းဇံက ပြောသည်။
မကွေးမြို့တွင် လေကြောင်းလိုင်း ပြန်လည်ပြေးဆွဲသင့်ဟု ဆို
၂၀၀၆ ကတည်းက ရပ်နားထားသည့် မကွေးမြို့ လေ ကြောင်းလိုင်းကို တစ်ပတ်လျှင် အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ် ဆင်းသက်ရန် ပြန်လည်အကောင်အထည်ဖော်ရေး တင်ပြထားသော်လည်း မကွေးတိုင်းအစိုးရနှင့် ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက အကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိသေး ဟု မြန်မာနိုင်ငံဟိုတ
မွန်လွှတ်တော်တွင် သဘောထားကွဲလွဲခဲ့သည့် မွန်ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုအလံကို ရွေးချယ်အတည်ပြု
မွန်ပြည်နယ် ကိုယ် စားပြုအလံတစ်ခု သတ်မှတ်ရာ တွင် အသုံးပြုမည့် အရောင်နှင့် ပတ်သက်၍ မွန်ပြည်နယ်လွှတ် တော်၌ သဘောထားကွဲလွဲပြီး ယမန်နေ့ လွှတ်တော်အစည်းအ ဝေးတွင် အနီရောင်အောက်ခံ၌ ရွှေဟင်္သာရုပ်ပုံပါဝင်သော အလံ ပုံစံကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်အတည် ပြုခဲ့သည်။
၂၁ ရာစုပင်လုံအစည်းအဝေး ဇွန်လ ၃၀ရက်တွင် ကျင်းပရန် သင့်၊ မသင့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးမည်
အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ် အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များအကြား ဆွေးနွေးထားသည့် ဇွန် ၃၀ ရက် တွင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေးကျင်းပရေး ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင် အပစ်ရပ်အဖွဲ့ထိပ်သီး ခေါင်းဆောင်များ၏ အစည်း အဝေး၌ ဆုံးဖြတ်မည်ဟု ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး(CNF)ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆ လိုင်းလျန်မှုန်းဆာ ခေါင်းက ပြောသည်။
ကျော်စောသတင်းထွက်သူများအား အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က စစ်ဆေးနိုင်သည့်အချက် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်အတည်ပြု
အဂတိလိုက်စား မှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က ကျော်စောသတင်းထွက်သူများ ကို စစ်ဆေးနိုင်သည့်အချက်ပါဝင် သော ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့သည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံ ရွှေရောင်မျိုးဆက်အနေဖြင့် ဆုဖလားများ ကိုင်မြှောက်မည့် အခွင့်အရေးရှိဟု ဟာဇက်ပြော
အင်္ဂလန်ရွှေရောင် မျိုးဆက်အနေဖြင့် အောင်မြင်မှု ဆွတ်ခူးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သော် လည်း ဘယ်လ်ဂျီယံ ရွှေရောင်မျိုး ဆက်အနေဖြင့် ဆုဖလားများကိုင် မြှောက်ခွင့်အတွက် စစ်မှန်သော အခွင့်အရေးတစ်ခု ရှိကြောင်း ဘယ်လ်ဂျီယံ အသင်းခေါင်း ဆောင် အီဒင်ဟာဇက် (၂၇) နှစ် က ပြောသည်။
ခြေစမ်းပွဲများတွင် အင်္ဂလန်၊ ပေါ်တူဂီနှင့် ဥရုဂွေးအနိုင်ရ၊ အိုက်စလန်နှင့်တောင်ကိုရီးယား သရေကျ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအကြို နောက်ဆုံးခြေစမ်းပွဲစဉ်များတွင် အင်္ဂလန်နှင့်ပေါ်တူဂီက အိမ်ကွင်း ၌ ပြိုင်ဘက်အသီးသီးကိုသက် သောင့်သက်သာ ကစားကာ အနိုင်ရခဲ့သည်။
ပရီးမီးယားလိဂ်ဆောင်းရာသီပွဲနားချိန်ကို အတည်ပြုပြီး ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီတွင် စတင်မည်
၂၀၁၉-၂၀ ဘောလုံးရာ သီကစ၍ အင်္ဂလန်ဘောလုံးလော ကအတွက် ဆောင်းရာသီပွဲနား ချိန်ကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်မည် ဟု အင်္ဂလန် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (အက်ဖ်အေ) က အတည်ပြုပြော ကြားသည်။
■ အားကစား သတင်းတိုများ
ဝက်စ်ဟမ်းမှ အာဂျင်တီးနားကွင်းလယ်လူ မန်နူရယ်လန်ဇီနီ (၂၅) နှစ်သည် လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းစဉ် ဒူးဒဏ်ရာရရှိပြီးနောက် ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲနှင့် လွဲချော်မည်ဖြစ်သည်။ အာဂျင်တီးနားသည် ဇွန်လ ၁၆ ရက် ၌ ခရိုအေးရှား၊ နိုင်ဂျီးရီးယားတို့ ပါဝင်သော အုပ်စု (D) တွင် အိုက်စ လန်နှင့်ပွဲဦးထွက် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
No.1840 Sunday, June 24, 2018